तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल फाल्गुन ३० गते बुधबार – Etajakhabar
तपाईको आजको राशिफल : २०७४ साल फाल्गुन ३० गते बुधबार
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः । पञ्चाङ्ग÷वारवेला,मुहूर्त र राशी श्रीसूर्य उत्तरायण,शिशिर ऋतु, साधारण नाम संवत्सर,शाके १९३९,सम्वत २०७४ साल फाल्गुन ३० गते बुधबार नेपाल सम्बत ११३८ चिल्लागा, सन् २०१८ मार्च १४ तारिक कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि अपरान्ह ३ वजेर २५ मिनेटसम्म, श्रवण नक्षत्र अपरान्ह २ वजेर ५८ मिनेटसम्म, शिवयोग, तैतिलकरण,आनन्दादियोग छत्र,सूर्य कुम्भ राशीमा चन्द्रमा राती ४ वजेर २ मिनेटसम्म मकर उप्रान्त कुम्भ राशीमा ।
ॐः–राहुकालः– मध्यान्ह १२÷१३ वजेबाट अपरान्ह १÷४२ वजेसम्म रहनेछ, यमघण्टायोगः– विहान ७÷४५ वजेबाट ९÷१४ वजेसम्म रहनेछ, दूरमुहूर्तः– पूर्वान्ह ११÷४९ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३७ वजेसम्म रहनेछ,यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । अशुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷४९ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३७ वजेसम्म रहनेछ, । गुली कालः– पूर्वान्ह १०÷४४ वजेबाट मध्यान्ह १२÷१३ वजेसम्म रहनेछ, ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ७÷४६ वजेसम्म लाभ वेला,७÷४६ वजेदेखि ९÷१५ वजेसम्म अमृत वेला,९÷१५ देखि १०÷४४ वजेसम्म काल वेला,१०÷४४ देखि १२÷१४ वजेसम्म शुभ वेला,१२÷१४ देखि १÷४३ वजेसम्म रोग वेला,१÷४३ देखि ३÷१२ वजेसम्म उद्वेग वेला,३÷१२ देखि ४÷४१ वजेसम्म चर र ४÷४१ वजे देखि सूर्यास्तसम्म लाभ वेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ७÷४२ वजेसम्म उद्वेग वेला,७÷४२ वजेदेखि ९÷१३ वजेसम्म शुभ वेला,९÷१३ देखि १०÷४४ वजेसम्म अमृत वेला,१०÷४४ देखि १२÷१४ वजेसम्म चर वेला,१२÷१४ देखि १÷४५ वजेसम्म रोग वेला,१÷४५ देखि ३÷१६ वजेसम्म काल वेला, ३÷१६ वजे देखि ४÷४६ वजेसम्म लाभ ४÷४६ वजे देखि सूर्योदयसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।
मेषः– कर्म क्षेत्रबाट बाहिर नजानु होला । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । तपाईबाट सहयोगको अपेक्षा अरुले पनि राख्ने छन् । आयको केहि हिस्सा मनोरञ्जनमा खर्च हुनेछ । व्यापार मन्द नै रहनेछ ।
वृषः– आशा गरे अनुसारको काममा सफलता मिल्ने छैन । काम गर्दा हेलचक्रयाई नगर्नु होला विग्रिने छन् । सुख शान्ति कम मिल्नेछ । दैनिक काममा सामान्य सुधार आउनेछ । अरुको भनाई खानु पर्ला । आम्दानी कम हुनेछ ।
मिथुनः– विना विचार काममा हात नहाल्नु होला घाटा हुन सक्छ । अलमलमा पर्नु भयो भने धेरै काम पछाडि धकेलिने छन् । आर्थिक कारोवारमा टाउको दुखाई बढि हुनेछ । स्वास्थ्यले कम साथ दिनेछ ।
कर्कटः–सावधानी पूर्वक काम गर्नु होला । लगनशिल भई गरेका काम सफल हुनेछन् । मिलेर काम गर्दा केहि समस्या आउने छन् । ग्रह गोचर सामान्य अनुकुल देखिन्छ । व्यापार व्यवसाय सामान्य सुधार आउनेछ ।
सिंहः– अन्तिममा तपाईका काम र कुरा सहि हुनेछन् । शुरुमा काम गर्दा निकै कठिनाई हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । पराक्रम घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन सन्तोषजनक नै होला ।
कन्याः– पढाईतिर भन्दा कमाईतिर बढि ध्यान जानेछ । काम गर्दा कहि कतैबाट विरोध आउन सक्छ । आलस्यता कामको शत्रु सम्झनु होला । आर्थिक कारोवार गर्दा सावधानी अप्नाउनु होला । व्यापारबाट अल्प लाभ हुनेछ ।
तुलाः– समयले खासै साथ दिने देखिन्न । विभिन्न खालका समस्या आउनेछन् । उपलब्धि विहि यात्रा हुनसक्छ । आफ्ना काम सफल गर्न बढि मेहनतको आवस्यकता पर्नेछ । अरुको भर धेरै नपर्नू होला धोका हुनसक्छ ।
वृश्चिकः– ढिला गर्दा अवसर फुत्किन सक्छ । समयमा गरेका काम सफल हुनेछन् । पराक्रम घट्ने छैन । कर्म प्राप्तिको चिन्ताले छाड्ने छैन । अरुको सहयोग कमै मिल्नेछ । आर्थिक कारोवारमा गडबढ हुन सक्छ सतर्क रहनु होला ।
धनुः– सहयोगको आशा गरेका ठाँउबाट पाईने छैन । अनावस्यक काममा समय र धन लगानी हुनेछ । विना तयारी काममा लाग्दा काम विग्रिने छन् । आरोप आउन सक्छ सर्तक रहनु होला । धन नदिनु होला ।
मकरः– सभा समारोहमा भाग लिन अवसर आउनेछ । आज गरेका कामबाट दाम मात्र होईन प्रशंसा पनि मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन राम्रै हुनेछ । घर परिवारबाट सहयोग सहानुभूति मिल्ला । गलत विचार त्यग्नु होला ।
कुम्भः– समय अधम चलेको छ । लगानी डुब्न सक्छ विचार पु¥याउनु होला । मिशनमा पुग्न सक्नु हुने छैन । अरुको कुरामा धेरै नलाग्नु होला । धन आफन्त मान्छे भए पनि नदिदा राम्रो हुनेछ । दुख कष्ट धेरै हुनेछ ।
मिनः– सानो मन गरेर काम नगर्नु होला । आज गरेका काम सफल हुने छन् । व्यापार व्यवसायबाट आय बढ्नेछ । घरमा मंगलिक काम हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । विदेश यात्राको योग पनि देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण २९, २०७४ समय: १९:०४:०१
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल कार्तिक ३० गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल कार्तिक २९ गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल कार्तिक २८ गते बुधबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : आजको राशिफल : २०७५ साल कार्तिक २७ गते मंगलबार